အခြားရောဂါများ Archives - Page 28 of 35 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
စိတ်ကြီးဝင်သောပြဿနာ သို့ အုန်းလွဲခြင်း ငယ်သူငယ်ချင်း မင်းမင်းတစ်ယောက် ဒေါက်တာစု အိမ်အလည်လာသော တစ်နေ့။ ဝင်လာကထဲက မျက်နှာက ခပ်မော့မော့ လည်ပင်လေးတောင် နည်းနည်းစောင်းနေလိုက်သေး။ ဒေါက်တာစု တစ်ယောက် မင်းမင်းအိမ်ထဲ ဝင်လာတာနဲ့ ” ဟဲ့ နင်က ဘာတွေစိတ်ကြီးဝင်နေတာလဲ? သူငယ်ချင်းအိမ်လာတာတောင်…
” ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့်အယူအဆမှားများ “ (1)ဝမ်းသွားနေချိန်အစာစားရင် ပိုဝမ်းသွားနိုင်လို့ အစားမစားသင့်ဘူး။ -> မှားပါတယ်။ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ အစားပါမစားဘဲနေမယ်ဆိုရင် အာဟာရပြတ်လပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဝမ်းသွားနေတဲ့အချိနိမှာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကို ပြနိလည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ဓာတ်ဆားသောက်ရမယ့်အပြင် အစားအစာကိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်းစားနိုင်ပါတယ်။သတိထားရမယ့် တစ်ချက်ကတော့ အစာချေစနစ်ကို ဝန်မပိစေဖို့…
သဲဝဲစားခြင်း မိုးရာသီမှာ အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးတတ်သူများမှာ အဖြစ်များတဲ့ သဲဝဲစားတဲ့ အရေပြား ရောဂါတစ်မျိုးအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။သဲဝဲစားတယ်လို့ အရပ်ထဲမှာ ခေါ်ကြပေမယ့် သဲက ဝဲစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေပြားမှိုရောဂါပိုးများကြောင့် ဖြစ်တာပါ ။ဆေးပညာအရတော့ Athlete’s Foot အားကစားသမားခြေထောက်ရောဂါပေါ့ ။ဘာလို့လဲဆိုရင် နိုင်ငံရပ်ခြားဒေသတွေမှာရှူးဖိနပ်…
Why rest when you're sick(sick leave)
“သင်ဖျားနေချိန် ဘာကြောင့် အိမ်မှာ နားနေသင့်တာလဲ” ခုလို မိုးရာသီချိန်မျိုးမှာ ရာသီတုပ်ကွေး၊ အအေးမိဖျားခြင်း၊နှာစေးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်.. ဆေးခန်းသွားပြပြီးတဲ့အခါမှာလည်း သင့်ကို အိမ်မှာ နားနေသင့်ကြောင်း ၊ အလုပ်အကိုင်တွေကို ဖြစ်နိုင်ပါက ခေတ္တရပ်နားသင့်ကြောင်း မှာပါလိမ့်မယ်… ဘာကြောင့်လဲ ? “လုပ်ငန်းခွင်မနှောင့်နှေးစေရန်”…
Allergy ခေါ် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ပြသနာ Allergy ခေါ် ဓာတ်မတည့်ခြင်းပြသနာဟာ လူတော်တော်များများကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။လူတွေမှာသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့ အစားအသောက် အနံ့ အလှကုန် ဆေးစသည်ဖြင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဓာတ်မတည့်ခြင်းဟာ သာမန်မပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေသာမက တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသက်ဆုံးသည်အထိတောင်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဆိုတာဟာ လူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့သာမန်ပစ္စည်းလေးတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်က…
သတိထားရမယ့် အူယောင်ငန်းဖျားရောဂါ ဒီရောဂါဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အင်မတန်အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ တစ်နှစ်ကို လူပေါင်းသန်းနှစ်ဆယ်လောက်ဖြစ်တတ်ပြီး လူနှစ်သိန်းလောက်က ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ? Gram-negative ပိုးဖြစ်တဲ့ Salmonella Typhi နဲ့ Salmonella Paratyphi serotype A>B>C စတဲ့ပိုးကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ ဘယ်လိုကူးစက်တာလဲ?…
သွေးလှူဒါန်းချင်ရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ သွေးလှူခြင်းဟာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလှူချင်တဲ့လူများဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရပါမယ်။ ပေါင်ချိန်အနည်းဆုံး ၁၁၀ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အသက် ၁၆နှစ်ရှိရပါမယ်။ အသက်၁၇နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင် မိဘရဲ့ထောက်ခံချက် ခွင့်ပြုချက်မလိုပါဘူး။ အသက် ၁၆နှစ်ဆိုရင်တော့ မိဘခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့? သွေးလှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Identification အသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရှိရပါမယ်။…